Dogma » Blog Archive » Trust, N'ịbụ ndị na Control, N'ikenye na Trust, na-atụghị anya Heroes
Trust, N'ịbụ ndị na Control, N'ikenye na Trust, na-atụghị anya Heroes
Nzuzo, Oge, Ego
M na-adịghị amasị debit iwu. M na mgbe mmasị echiche na ọzọ kwadoro nwere ike, na uche, -fọrọ nke nta ọ bụla ego nke m ego (ọma … ihe ọ bụla bụ dị). A otu gosiri na nke na- MTN ga-e ẹse m a na-eji a debit iji. Ma eleghị anya, “mma” na-akpata bụ bụghị dị otú ahụ a ihe ọjọọ.
Echere m na ndị penultimate ajụjụ ebe a bụ ma ma ọ bụ na ị chọrọ mma na pụrụ ịtụkwasị obi oru (na nke a na gị ego gị) – ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-apụghị ịtụkwasị ha obi na-adị njikere ịhapụ ya mma. M ikpe, n'agbanyeghị na m ka na-ajụ na mma, M mụtara n'ụzọ siri ike na MTN na ọ doubly nwere ike na-adịghị ka gị ejikọrọ ụwa na-ebelata ka “n'àgwàetiti dịpụrụ adịpụ” ọnọdụ. Fọrọ nke nta onye ọ bụla taa na-aga na na mma-akpata.
N'akụkụ aka nke ọzọ, ugbu a ogologo oge gara aga, I had a dispute with Planet Fitness ebe mma bụ a mma ihu abụọ. M kọrọ ha azụmahịa omume ka Consumer Complaints Commission (ebe ọ bụ na re-haziri ka National Consumer Commission) and never got feedback from them. The gist of the issue is that Planet Fitness’s sales agent lied to me and a friend in order to get more commission/money out of my pocket.
M a Discovery vitality so nke na-enye ọtụtụ uru, gụnyere belata udu na adịchaghị ụdị – ukwuu n'ime ahụ ike-metụtara N'ezie, as Discovery is a Medical Aid/Health Insurance provider. Itinye ya nanị, Discovery bụ egwu. Vitality si uru ekpuchi mgbatị memberships nke ozokwa na-agụnye Planet Fitness. You still have to pay something, a obere iriba ama nke ụdị, ka Discovery, maka mgbatị otu. Ma, ka emechara, ha chọrọ ka m na-ike, so they don’t mind footing the bulk of the bill. Ma, o doro anya na, nke a pụtara Planet Fitness’ ahịa mmadụ adịghị enweta ọrụ!
Ya mere, ihe ka nke a na n'ihi na? N'ihi na PF si ahịa gị n'ụlọnga nyere m otu ebu ọnụ ọgụgụ maka a “Vitality dabeere” otu. Na ọ ghara ụgha. O wee ama m banye na dotted akara maka ihe ebu price nke a “mgbe” otu (ee, ọ bụ n'ezie karịa ọbụna a mgbe otu ga-eri), ending up about 4 na 5 ugboro dị ukwuu dị ka vitality dabeere otu.
Some time in 2011 M mechara wisened ruo-akwụ ụgwọ m e kwesịrị ịbụ na-akwụ ụgwọ. Discovery m n'aka ga-adị oke obi ụtọ banyere nke a fiasco. M gwara ndị Manager na-amụ, na m e mesiri obi ike na dum nkwekọrịta ga-hapụrụ. M otu maka ime ihe ike … ma ọ bụrụ na ya maka egwuregwu … na Octagon … ma mgbe m 5th nleta Manager ịjụ ihe mere ndị Debit Asọ ka nọ na-eme, ọ gwara m na-idem m ama ada ngwá agha m maka nleta. Mgbe a ole na ole ọzọ nleta, na Manager ahụ n'ezie hapụrụ Planet Fitness na kọwaara m na “nkwekọrịta” was between myself and Head Office and that the local gym, o doro anya na a franchise-ịke ime, ama obere ka ọ dịghị ikwu okwu banyere ma ma ọ bụ na ọ pụrụ ịkagbu. Ọ bụrụ na Head Office sị mba, siri ike chioma.
By this point I’d lost it. I had my bank put a Kwụsị ka debit iwu. It was a huge schlep: I had to contact the bank every month because the debit order descriptions would change ever so slightly. It also cost me a little every couple of months to “reinstate” the blocking ọrụ. Apụghị m ma na-eche ichekwa ego na bank usoro akwado mgbe okwu ma mkpara adịghị bụchaghị mara otú iji ya.
Technically I’m still waiting on the CCC to get back to me (mgbe mere – na N'ezie ha na-re-haziri dị ka e kwuru n'elu otú ahụ ikpe eleghị anya dara site cracks). N'ezie, site na mgbe PF chọkwara Blacklist m n'ihi na ọ bụghị na-akwụ ụgwọ!
Na-atụghị anya dike
A haphazard aha na nke na Discovery (Echere m na m na-akpọ ha banyere a dọkịta eze nleta) rụpụtara na a callback site na otu nke Discovery si elekọta mmadụ. Ha na-ahụ gwara m ka m na-akọwa nsogbu, n'ụzọ zuru ezu na na na ide, ka mma ịkọwa site m n'ọnọdụ ihe merenụ n'ezie. M ụgwọ. Ọ na-enyo m bụ nri banyere ha ka ha ghara ịbụ “kwa obi ụtọ” gbasara ya. N'ezie ha n'ezie ọ dịghị amasị. About three weeks later, Planet Fitness refunded m na zuru maka niile ewerekwa ego na gatụla ugwo ha.
Discovery bụ Awesome. 🙂
Mwube MikroTik QoS – maka Home / Obere Office – Part 1 »